နှစ်သစ်ကို ပိုမိုကျန်းမာစွာ စတင်နိုင်‌အောင် သင့်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကို အခုကစပြီး ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ ဒီတော့ Pulse အက်ပလီကေးရှင်းနဲ့အတူ ခြေလှမ်းတွေလှမ်းရင်း Walk2Win အစီအစဉ်မှာပါဝင်လိုက်ပါ။
ပြိုင်ပွဲအသေးစိတ်အချက်အလက်များ နှင့် ပါ၀င်ယှဥ်ပြိုင်နည်း အဆင့်ဆင့်
ပြိုင်ပွဲကို (ပြိုင်ပွဲကာလဖြစ်သည့်) ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်၀ါရီလ ၇ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပနေသည့် ကာလအတွင်း ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် စာရင်းပေးထားသူတိုင်းသည် တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ခြေလှမ်း (၅,၀၀၀) လျှောက်ခြင်းဖြင့် Walk2Win အစီအစဥ် တွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့်အားလုံးကို လုပ်ဆောင်၍ စာရင်းသွင်းပြီးမှသာ ပြိုင်ပွဲသို့ဝင်ရောက်သည်ဟု သတ်မှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ (အောက်တွင် ကြည့်ရှုပါ)
အဆင့် (၁) - Google Play Store သို့မဟုတ် QR ကုဒ်မှတစ်ဆင့် Pulse အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်ရယူပြီး အကောင့်ဖွင့်ပါ။
အဆင့် (၂) - မှတ်ပုံတင်ထားသော ရိုးမဘဏ်အီးမေးလ်လိပ်စာကို အသုံးပြုပြီး Pulse အက်ပလီကေးရှင်းသို့ ဝင်ပါ။
အဆင့် (၃) – screen ၏ အောက်ဆုံးတွင် ရှိသော အသည်းပုံသင်္ကေတကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၄) – Fitness Tracker စာတန်းအား နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၅) - ကျန်းမာရေး အက်ပလီကေးရှင်းတွေဖြစ်တဲ့ (Google Fit/Apple Health) ဒါမှမဟုတ် အားကစားလုပ်ရင် ဝတ်ဆင်ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေ (Fitbit/Garmin) နဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ။
အဆင့် (၆) - ကျန်းမာရေး အက်ပလီကေးရှင်းကို Pulse အကောင့်နဲ့ sync ပြုလုပ်ပါ။
အဆင့် (၇) - အခု သင့်ရဲ့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို Pulse အက်ပလီကေးရှင်းကနေ တိုက်ရိုက် မှတ်သားပေးနေပါပြီ။
အဆင့် (၈) - အိမ် သို့ အလုပ်နေရာ အနီးအနားရှိ လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာတွင် နေ့စဥ် လမ်းလျှောက်နိုင်ရန် အချိန်သတ်မှတ် စီစဥ််ပါ။
Walk2Win ပြိုင်ပွဲကို ပရူဒန်ရှယ်အာမခံက စီစဉ်ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဥ် ကာလမှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်၀ါရီလ ၇ ရက် ၂၃ နာရီ ၅၉ မိနစ် (မြန်မာစံတော်ချိန်) အထိဖြစ်ပြီး ဖော်ပြပါ ရက်များအားလုံးသည် (“အစီအစဥ် ကာလ”) တွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့် ယခု စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကို သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်မည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များအတွင်း အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ရမည့် လိပ်စာရှိရပါမည်။
ပေးအပ်မည့် ဆုဓာတ်ပုံများ (Sportbands/ Walking Shoes/ Fitness Kits/ Sport T-Shirts) သည် ဖော်ပြချက်အတွက်သာ အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ချီးမြှင့်မည့် ဆုသည် အရောင်၊ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပုံစံ ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲအတွင်း ခြေလှမ်းအများဆုံး လျှောက်ခဲ့သူများစာရင်းကို ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်ကြာပြီးနောက် Yammar တွင် ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အနိုင်ရရှိသူများ ကြေညာသည့်အခါတွင် အနိုင်ရရှိသူများသည် Pulse အက်ပလီကေးရှင်း၏ တရားဝင် အသုံးပြုသူများ ဖြစ်ရမည်။ (အငြင်းပွားစရာ အခြေအနေတစ်ခု ရှိလာပါက ပရူဒန်ရှယ်အာမခံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာလျှင် အတည်ဖြစ်ပါသည်) အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အနိုင်ရရှိသူများသည် နောက်ထပ် အကြောင်းကြားမှု တစ်စုံတရာမလိုအပ်ဘဲ ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် အရည်အချင်းမပြည့်ဟု သတ်မှတ်မည်။
ပရူဒန်ရှယ် အာမခံအနေဖြင့် ကံစမ်းမဲ၏ နောက်ဆုံးရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အနိုင်ရရှိသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ထပ်မံ စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်ခွင့် ရှိရမည်။
အနိုင်ရရှိသူများအား leaderboard ပေါ်တွင်အခြေခံ၍ ကွန်ပြူတာစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲ၏ ရလဒ်များ (အနိုင်ရရှိသူ၏ နာမည်အပြည့်အစုံနှင့် ဖုန်းနံပါတ်နောက်ဆုံးသုံးလုံး အပါအဝင်) ကို စာရင်းပေးသွင်းထားသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာမှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပရူဒန်ရှယ် အာမခံမှ Pulse အက်ပလီကေးရှင်းတွင် စာရင်းပေးသွင်းစဉ်က ထည့်သွင်းထားသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်/အီးမေးလ်လိပ်စာ တို့မှတစ်ဆင့် ဆုထုတ်ယူရန် လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း အီးမေးလ်/SMS စာတို/Viber တို့ဖြင့် တစ်ဦးချင်း အသိပေးအကြောင်းကြားသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဆုများအား ငွေသားဖြင့် လဲလှယ်ထုတ်ယူခြင်း၊ တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်၍မရသလို သတ်မှတ်ထားသော ဆုထုတ်ယူနိုင်သည့် ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ (ရန်ကုန်/မန္တလေး) တွင်သာ ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်သည်။ ကံထူးရှင်သည် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ဆုလက်ဆောင် မထုတ်ယူခြင်း၊ အချိန်မီ မထုတ်ယူနိုင်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဆုကို လက်လွှတ်လိုက်ပြီဟု သတ်မှတ်ပြီး နောက်ထပ် အကြောင်းကြားမှု တစ်စုံတရာ မလိုအပ်ဘဲ လာရောက်မထုတ်ယူနိုင်ဟု သတ်မှတ်မည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ထားမှုကို ဖျက်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် ပြိုင်ပွဲမှထွက်ရန် ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာအာမခံ၏ Customer Service ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်သော ၀၉၇၇၀၁၁၀၀၁၀ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာအာမခံ၏ Facebook Messenger တွင်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ထားမှုကို ဖျက်သိမ်းရန် သို့မဟုတ် ပြိုင်ပွဲမှထွက်ရန် အကြောင်းကြားမှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူများအား ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ၊ Pulse အက်ပလီကေးရှင်း၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အသိပေးချက်အား သေချာစွာ နားလည်သဘောပေါက်စေရန် ဖတ်ရှုပြီးမှ သဘောတူလက်ခံရန် တိုက်တွန်းအကြံပြုလိုပါသည်။
ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာအာမခံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းဖြင့် ဖော်ပြပါ ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအား ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြိုင်ပွဲအား ပြင်ဆင်/ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာအာမခံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာလျှင် အတည်ဖြစ်ပါသည်။
ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာအာမခံမှ နောက်ထပ်ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များအတွက် အီးမေးလ် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် မှတဆင့် လူကြီးမင်းအား ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Apple Inc. သို့မဟုတ် Google LLC သို့မဟုတ် Fitbit သို့မဟုတ် Garmin တို့သည် ယခု Walk2Win အစီအစဉ်အား ထောက်ပံ့မှု တစ်စုံတရာ ပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိသလို ဆက်စပ်မှု တစ်စုံတရာ မရှိပါ။
ထပ်မံသိရှိလိုပါက ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာအာမခံ၏ Customer Service ဖုန်း - ၀၉၇၇ ၀၁၁၀ ၀၁၀ သို့ (ရုံးချိန် - တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့၊ နံနက် ၉ နာရီမှ ၅ နာရီခွဲအတွင်း၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်များမှလွဲ၍) ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာအာမခံ၏ Facebook Messenger တွင်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာအာမခံသည် ပြိုင်ပွဲတွင် ပေးအပ်သည့် ဆုလက်ဆောင်များအား ထုတ်လုပ်/ဖြန့်ချိသူ နှင့် ထုတ်လုပ်/ဖြန့်ချိသူများ၏ ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်ပါ။ ဆုလက်ဆောင်၏ အရည်အသွေး၊ အသုံးဝင်မှု၊ ပို့ဆောင်ပေးမှု၊ အသုံးပြုမှု စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်သော နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေများအတွက် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ ဆုလက်ဆောင် အသုံးပြုရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်/ဖြန့်ချိသူက ဖော်ပြထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအရ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ဆုလက်ဆောင်နှင့် ပတ်သက်သည့် မည့်သည့်ကိစ္စရပ် တစ်စုံတရာကိုဖြစ်စေ (ဆုလက်ဆောင်၏ အရည်အသွေး၊ အသုံးဝင်မှု၊ ပို့ဆောင်ပေးမှု၊ အသုံးပြုမှုတို့ အပါအဝင် အခြားကိစ္စများ) တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု မပြုလုပ်ပါ။ ဆုလက်ဆောင်ကို အသုံးပြုခြင်း၊ မှားယွင်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီးခြင်းတို့အတွက် ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာအာမခံမှ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု မပြုလုပ်ပါ။
ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာအာမခံ၏ ဝန်ထမ်းများ နှင့် အကြံပေးများအားလုံး ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိပါ။
ဒီပြိုင်ပွဲအစီအစဥ် မှာ ဘယ်လို ပါဝင်နိုင်မလဲ?
ဒီပြိုင်ပွဲအစီအစဥ် မှာ ပါဝင်ဖို့အတွက် အောက်ပါ အဆင့်တွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။
Pulse by Prudential အက်ပလီကေးရှင်းကို (Andriod ဗားရှင်း 8.1 နှင့် အထက်) ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ရိုးမဘဏ်အီးမေးလ်နဲ့ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။
အားကစား လုပ်ရင် ဝတ်ဆင်ရတဲ့ပစ္စည်း (သို့) fitness tracker app (Fitbit/Gar သို့မဟုတ် Google Fit/ Apple Fit ကဲ့သို့ အက်ပလီကေးရှင်း) တွေနဲ့ Pulse by Prudential အက်ပလီကေးရှင်း ထဲက Fitness Tracker လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။
နေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်ဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ပြီး နေအိမ် ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်အနီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုရွေးထားပါ။
တစ်နေ့မှာ ခြေလှမ်းဘယ်နှစ်လှမ်း ပြည့်အောင် လျှောက်ရမှာလဲ?
ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း တစ်နေ့ အနည်းဆုံး ခြေလှမ်း ၅,၀၀၀ ပြည့်အောင် လျှောက်ဖို့လိုပါတယ်။
တစ်နေ့အတွင်း လျှောက်ရမယ့် အနည်းဆုံး ခြေလှမ်းမပြည့်ခဲ့ရင် ပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ် အကျုံးမဝင်တော့ဘူးလား?
အပတ်စဉ်အနိုင်ရရှိသူတွေကို Yammar မှာ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ရက်နေ့တွေမှာ ကြေညာသွားမှာပါ။
Leaderboard ကို ဘယ်တော့ ကြေညာမှာလဲ?
ပြိုင်ပွဲမှာ ခြေလှမ်းအများဆုံး လျှောက်ခဲ့တဲ့သူစာရင်း Leaderboard ကို တစ်ပတ် တစ်ကြိမ်ကြေညာပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဥ် မှာ အများဆုံး လျှောက်ရမယ့် ခြေလှမ်းအရေအတွက်ကို ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားပါသလဲ?
စုစုပေါင်း ခြေလှမ်းအရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာတဲ့သူဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် လျှောက်ရမယ့် ခြေလှမ်းသတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီသူတွေထဲက အနိုင်ရရှိသူကို ရွေးချယ်သွားမှာပါ။
အနိုင်ရတဲ့သူတွေကို အပတ်စဥ်ကြေညာသွားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ အနိုင်ရတဲ့သူတွေရဲ့ အချက်အလက်အသေးစိတ်တွေကို သူတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အတည်ပြုသွားမှာပါ။ ဒီအချိန်မှာပဲ ဆုလက်ဆောင် ပို့ပေးရမယ့် နေရာကို တစ်ခါတည်း စစ်ဆေးပြီး ပို့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဥ်မှာ ဆုရတယ်၊ မရဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
သူငယ်ချင်းတွေ၊ အမျိုးတွေကို တူတူဝင်ပြိုင်ဖို့ ခေါ်လို့ရလား?
ဟုတ်ကဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ဖို့အတွက် အားပေးပါတယ်။
Pulse by Prudential အက်ပလီကေးရှင်းကို ဘယ်လို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး အကောင့်ဖွင့်ရမလဲ?
QR Code ကို scan ဖတ်ပါ (ဒါမှမဟုတ်) Android ဖုန်းတွေအတွက် Google Play Store ကနေ “Pulse” ကို ရှာလိုက်ပါ။
App ကို ဝင်ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်တွေကို ရယူလိုက်ပါ။
Pulse အက်ပလီကေးရှင်းက Android နဲ့ iOS ပလက်ဖောင်းတွေမှာ ရှိလား?
Pulse အက်လီကေးရှင်းကို Android အသုံးပြုသူတိုင်း အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို ကျန်းမာရေးသုံး tracker တွေက Pulse အက်ပလီကေးရှင်းကို ချိတ်ဆက်လို့ရလဲ?
အောက်ဖော်ပြပါ ကျန်းမာရေးသုံး tracker တွေက Pulse အက်ပလီကေးရှင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။
၃. Apple Health
၄. Google Fit
အက်ပလီကေးရှင်းကို အကောင်းဆုံး အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အနည်းဆုံး Android ဗားရှင်းက ဘယ်လောက်ရှိရမလဲ?
ကိုယ်ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းက အနည်းဆုံး Android ဗားရှင်း 8.1 ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Pulse အက်လီကေးရှင်းမှာ စာရင်းသွင်းဖို့ ချန်နယ်ဘယ်နှစ်ခု သုံးလို့ရလဲ?
စာရင်းသွင်းတဲ့အခါ အသုံးပြုဖို့ စုစုပေါင်း ချန်နယ် လေးခုရှိတာကြောင့် အသုံးပြုသူက ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Pulse ကို App Store ရော Play Store မှာပါ ရှာလို့မရဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Pulse အက်ပလီကေးရှင်းကို install မလုပ်ခင် အောက်ပါအချက်တွေကို စစ်ဆေးပါ။
၁. App Store ဒါမှမဟုတ် Play Store က မြန်မာနိုင်ငံက ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးပါ။
၂. ဖုန်းရဲ့ Android ဗားရှင်းကို စစ်ပါ။ Pulse အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ အနိမ့်ဆုံး Android ဗားရှင်းက 8.1 ရှိရပါမယ်။
၃. အဲ့ဒါမှ မရသေးဘူးဆိုရင်တော့ 09770110010 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Pulse အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုဖို့အတွက် အခကြေးငွေ ပေးစရာလိုလား?
Pulse အက်ပလီကေးရှင်းကို Android အသုံးပြုသူတိုင်း အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ် ရယူနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနေရာ ရှာဖွေခြင်းတွေကို customer တွေရော customer မဟုတ်တဲ့သူတွေပါ အခကြေးငွေ တစ်စုံတရာ မရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Pulse အက်ပလီကေးရှင်း သုံးဖို့ အင်တာနက် ဖွင့်ထားဖို့လိုလား?
လိုပါတယ်။ Pulse အက်ပလီကေးရှင်းသုံးဖို့ အင်တာနက်ဖွင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။
Pulse အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်ဖို့ ရှာမတွေ့ဘူး။
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် အဆင့်အချို့ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. အင်တာနက်လိုင်း ကောင်း၊ မကောင်း စစ်ပါ။
၂. Android အတွက်ဆိုရင် Google Play Store ကို restart ချပြီး အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ။
၃. Google Play Store နဲ့ App Store ရဲ့ နိုင်ငံကို စစ်ပါ။
၄. အခုအထိ မရသေးဘူးဆိုရင် ဖုန်းကို restart လုပ်ပါ။
၅. အခြားအခက်အခဲတွေရှိရင်တော့ ပရူဒန်ရှယ်အာမခံရဲ့ Customer Service ကို 09770110010 ကနေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Pulse အကောင့်ကို unlock ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? / password မေ့သွားပြီ။
'Forgot Password' ကို နှိပ်ပြီး ပြထားတဲ့ အဆင့်တွေအတိုင်း ဆက်လုပ်ပါ။
Pulse အက်ပလီကေးရှင်းကို အရင်တည်းက ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားပြီးပါပြီ။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Android အတွက် Google Play Store ကနေ Pulse by Prudential အက်ပလီကေးရှင်းရဲ့ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို install လုပ်ဖို့ အဆင့်များ
၁. Pulse အက်ပလီကေးရှင်း အဟောင်းကို uninstall လုပ်ပါ။
၂. Pulse အက်ပလီကေးရှင်း နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ။
၃. အရင်ရှိပြီးသား အသုံးပြုသူ ID နဲ့ စကားဝှက်ကို သုံးပြီး Pulse အက်ပလီကေးရှင်းကို ဝင်ရောက်ပါ။
အီးမေးလ်နဲ့ အကောင့်ဖွင့်လိုက်ပေမယ့် တစ်ခါသုံးစကားဝှက် OTP မရဘူး။
Junk ဒါမှမဟုတ် Spam အီးမေးလ်ထဲကို ရောက်နေလားဆိုတာ စစ်ကြည့်ပါ။ အီးမေးလ်လိပ်စာ စာလုံးပေါင်းမှန်မမှန် စစ်ဆေးပါ။
‘အကောင့်’ ကနေ “အကြံပြုချက်ပေးရန်” ကို သွားပြီး သင့်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
Pulse အဖွဲ့က စာပြန်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲ?
Pulse အဖွဲ့ကနေ အလုပ်ဖွင့်တဲ့နေ့ ၃ ရက်ကနေ ၅ ရက်အတွင်း စာပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။